Ciyaaraha – Radio Jowhar
August 13, 2017	9 Comments 261 Views
Kooxda Manchester United ayaa ku soo laabatay baacsigii ay ugu jirta xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann sida ay sheegayaan wararku. Kooxda PSG ayaa la sheegayaa in ay ku dhowdahay saxiixa goolhayaha kooxda Atletico Madrid ee Jan Oblak kaas oo sabab u noqon kara in uu Antoine Griezmann ku biiro kooxda man United. Jan Oblak ayaa ...
June 14, 2017	12 Comments 272 Views
Xiriirka kubadda cagta degmada jowhar ayaa sheegay in maalinta berito ah in uu dib u bilaaban doono tartarnka horyaalka heerka koowaad ee magaalada Jwohar oo mudduo isbuuc ah hakad ku jiray ka dib khilaaf soo kala dhexgalay kooxaha iyo gudiga Gudoomiyaha xiriirka kubada cagta degmada Jowhar Guuleed Cabdi Guuleed oo la hadlay idaacada Jowhar ayaa sheegay in lasoo xaliyay khilaafka ...
June 6, 2017	Comments Off on Ciyaaryahankii hore ee kooxda Newcastle Cheick Tiote oo geeriyooday 199 Views
Cheick Tiote oo horay ugu ciyaari jiray kooxda Newcastle ayaa geeriyooday xili uu ku guda jirray tababar. Tiote ayaa mudo todobo sano ah u ciyaari jirray kooxda Newcastle ee ka dhisan dalka Ingiriiska Waxa uuna u dhashay dalka Ivory Coast. Ciyaaryahankan ayaa dheellay 150 ciyaarood sadax xilli ciyaareed oo la soo dhaafay. Waxa uu hadda u ciyaarayay koox dalka Shiinaha ...
June 3, 2017	1 Comment 244 Views
Kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobka horyaalka Yurub ee Champion League kadib markii ay 4-1 ay ugaga badisay naadiga Juventus ciyaar final ahayd oo caawa ka dhacday magaalada Cardif ee Wales. Ciyaar aad u adkeyd ayna labada koox soo bandhigeen xirfad ayaa 90kii daqiiqo kadib kooxda Real Madrid waxa ay noqotay mid taariiq cusub u dhigta koobkan iyadoo labo ...
Roberto Firmino oo kasoo bogsaday dhaawacii uu garoomada kaga maqnaaa
May 20, 2017	1 Comment 220 Views
Wargayska Express ee ka soo baxa dalka England ayaa warbixin ka soo saaray dhaawaca xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee Roberto Firmino. Xiddigan reer Brazil ayaa lagu soo waramayaa in uu diyaar u yahay in uu kooxdiiisa u ciyaaro kulanka ugu dambeeya horyaalka ee ay Axada la ciyaari doonaan kooxda Middlesbrough. Firmino ayaa dhaawac ku seegay kulankii sabtidii ay ...
Alexandre Lacazette oo kooxdiisa Lyon u sheegay in la fasaxo
May 20, 2017	Comments Off on Alexandre Lacazette oo kooxdiisa Lyon u sheegay in la fasaxo 156 Views
Bartilmaameedkii kooxda Arsenal Alexandre Lacazette ayaa la sheegay inuu ku dhowaaqay inuu damacsan yahay inuu iskaga dhaqaajiyo kooxda Lyon. Macalin Wengar ayaa loo sheegay inuu heegan weeyn galo maadaama xidigaan laga yaabo inuu dhageeysto dalabyada kale ee ka imaankara kooxaha kale ee isaga soo dalbanayaan. Xogta muhiimka ah ee la ogaaday ayaa ah in xidigaan uu damacsan yahay inuu ka tago ...
Liverpool oo dooneysa in Man United iyo Chelsea ku garaacdo saxiixa Benjamin Mendy
May 20, 2017	Comments Off on Liverpool oo dooneysa in Man United iyo Chelsea ku garaacdo saxiixa Benjamin Mendy 128 Views
Kooxda Liverpool ayaa qorsheeyneysa inay soo qaadato mid kamid ah xidigaha kooxda Monaco kaasi oo bartilmaameed xoogan u ahaa kooxaha Chelsea iyo Manchester United. Benjamin Mendy oo ka ciyaara daafaca bidix ayey doonayaan inay soo qaataan kaasi oo wax badan ka caawiyey kooxda Monaco inta uu socday horyaalka France ee Ligue 1. Gianluca Di Marzio ayaa sheegeysa in kooxda Liverpool ...
Cristiano Ronaldo oo ka kulmaya Madaxweynaha Real Madrid maxa ka wada hadli doonaan?
May 20, 2017	1 Comment 155 Views
Kooxda Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkaan wacdaro ka sameeynkarta Qaarada Yurub hadii ay ku guueleysato horyaallak Spain ee La Liga iyo Champions League. Cristiano Ronaldo iyo xidigo badan ayaa kaalin weeyn ka geeystay guusha ay gaartay kooxda Real Madrid kuna aadan inay La Liga u jiraan hal dhibcood. Si kooxda ay usii wado duulaanka iyo dar darta ay ku jirto ...
Wararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Qaarada Yurub
May 19, 2017	1 Comment 163 Views
Jimco wanaagsan dhamaan aqristiyaasheena kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda saakey. Waxyaabo badan oo xiiso leh kuna saabsan kubada cagta ayaan idiin la wadaageynaa oo aan kusoo qaadandoonaa warbixinteena. *Macalinka kooxda Chelsea ayaa kalsooni badan lasiindoonaa waxaana uu helidoonaa lacag dhan £200m,waxaana laga doonayaa inuu kooxda keensado ciyaaryahano muhiim ah xilli ciyaareedka soo socda.Daily Telegraph. ...
Inter Milan oo dagaal ugu jirta sidii ay ula soo wareegi lahayd Kurt Zouma
May 17, 2017	1 Comment 141 Views
Kooxda Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay damacsan tahay soo qaadashada ciyaaryahanka kooxda Chelsea Kurt Zouma xilli ciyaareedka soo socda. Kooxda lagu naaneeso The Nerazzurri ayaa damacsan in xidigaan ay kaga maaranto Roma daafeceeda Antonio Rudiger kaasi oo u muuqda in Roma ay ku dalbatay lacag xoogan. Tuttosport ayaa sheegeysa in Zouma uu bartilmaameed waali ah uu u noqday ...